बाबुराम–नारायणकाजी संघर्षः ‘अवसरवादी’ कि ‘झुसिलकिरा’ ? « Himal Post | Online News Revolution
बाबुराम–नारायणकाजी संघर्षः ‘अवसरवादी’ कि ‘झुसिलकिरा’ ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २९ कार्तिक ०७:३०
तनहुँको तुरतुरेबाट पूर्व मस्र्याङ्दी तरेपछि पालुङटार फाँट आउँछ । यो क्षेत्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै जसरी भूगोल परिवर्तन हुन्छ, त्यसरी नै चुनावी दृश्य पनि बदलिन्छ । प्रत्येक घरमा फ्लेक्स प्रिन्टसहितका ब्यानर राखिएका छन् । बिजुलीका पोल र रूखका हांँगामा छपक्कै सूर्य र गोलाकारभित्र हँसिया–हथौडा, आंँखा र रूख चिह्न अंकित झन्डा फहराइरहेका छन् ।
ओहोरदोहोर गर्ने गाडीबाट चुनावी गीत गुन्जिन्छन् । ठूला रूखका छहारी र बिसौनीमा सर्वसाधारणको झुरुप्प जमघट भेटिन्छ । ती जमघटहरूमा दुई पात्रको चर्चा सुनिन्छ– पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ।
गोरखामा भट्टराईको यो तेस्रो चुनावी प्रतिस्पर्धा हो । श्रेष्ठ पहिलोपटक चुनाव लड्न आएका हुन् । संविधानसभाका दुई चुनावमा भट्टराईले अत्यधिक मत ल्याएर जितेका थिए । श्रेष्ठ भने संविधानसभामा मकवानपुरबाट चुनाव लडेका थिए । दुई सहयोद्धा मात्र होइन, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले नै यो क्षेत्रको चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । वामपन्थी गठबन्धनले देशव्यापी चुनावी सभाको सुरुवात नै गोरखाबाट गर्दैछ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल श्रेष्ठको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न बुधबार गोरखा आउँदैछन् । वामपन्थी गठबन्धनको सभालगत्तै मंसिर २ गते भट्टराईको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न यहीं लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सभा राखिएको छ । सभालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत आउँदैछन् ।
जित वा हारले राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुने भएकाले दुवै नेताका अभिव्यक्तिमा एकअर्काप्रति निकै छेडछाड भेटिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको वामपन्थी गठबन्धनका उम्मेदवार भएकाले श्रेष्ठलाई संगठनको मुख्य बलमा जित हासिल गर्छु भन्ने विश्वास छ । त्यसैले उनी भट्टराईलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै ठान्दैनन् । ‘लोकतन्त्रमा उम्मेदवार हुन पाउने हक छ, त्यसैले उहाँ ९भट्टराई० उम्मेदवार हुन आउनुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
‘मलाई उहाँ प्रतिस्पर्धी भएर कुनै पनि चुनौती छैन, निष्ठा र विचारमा उहाँसँग तुलना नै हुँदैन,’ उनले भने । भट्टराईलाई आफ्नो संगठन बलियो नभए पनि विगतमा जिल्लामा गरेको विकास र कांग्रेसको समर्थनमा श्रेष्ठलाई सजिलै हराउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले उनी पनि श्रेष्ठलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै ठान्दैनन् ।
गोरखामा जन्मे पनि जिल्लासँग श्रेष्ठले कुनै सम्बन्ध नै नराखेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘गोरखाका जनताले मलाई यसअघि ऐतिहासिक मत दिएर विजयी गराएका छन् । गोरखालाई मैले कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएको छु,’ भट्टराईले भने, ‘तर उहाँले कहिल्यै गोरखालाई कार्यक्षेत्र बनाउनुभएन, उहाँसँग मेरो प्रतिस्पर्धा नै छैन ।’
श्रेष्ठ अहिले भट्टराईको कुनै राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र निष्ठा नभएको प्रचार गरिरहेका छन् । उनी भट्टराईलाई अवसरवादी र व्यक्तिवादीका रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘आज एउटा, भोलि अर्को कुरा गर्नेबाट लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन,’ श्रेष्ठको टिप्पणी छ, ‘मौकावाद, अवसरवाद र व्यक्तिवादले अवसर पायो भने लोकतन्त्र नै समस्यामा पर्छ ।’
माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेको, उक्त पार्टीलाई संघीय समाजवादी फोरमसँग मिसाउन प्रयास गरेको, स्थानीय चुनावमा फोरमकै चिह्न प्रयोग गरेको, पछिल्लो समय वाम गठबन्धनमा मिलेको र एक सातामै त्यसलाई छाडेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेको लगायतका घटनालाई भट्टराईको अस्थिरताको उदाहरणका रूपमा श्रेष्ठले चर्चा गर्दैछन् ।
चुनावी छेडछाडबीच दुवैले माओवादी आन्दोलनको इतिहासलाई मत माग्ने आधार बनाएका छन् । माओवादी छाडेर गएका भट्टराईलाई त्यही आन्दोलनको पृष्ठभूमि जोडेर केही मत ल्याउँछु भन्ने लागेको छ । त्यसैले ‘जनयुद्ध’ लडेको र त्यसलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गरी अहिलेको अवस्थामा ल्याउन आफूले योगदान गरेको दाबी गर्छन् ।
भट्टराईले श्रेष्ठलाई ‘जनयुद्ध’ विरोधीका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । माओवादी युद्धमा श्रेष्ठ सहभागी भएका थिएनन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्र उनी माओवादीसँग एकीकरणमा आएका हुन् । त्यसैले जनयुद्धलाई जायज ठान्ने मतदाताहरूको भावनासँग जोडिन भट्टराईले श्रेष्ठको विगत कोट्याउने गरेका छन् ।
‘विकास गर्ने को’ ?
भट्टराईको पनि श्रेष्ठलाई उस्तै जवाफ छ । ‘म बाहिरिएपछि यही क्षेत्रका माओवादीकै नेता हितराज पाण्डे स्थानीय विकासमन्त्री हुनुभएको थियो, पार्टीले गर्ने हो भने त उहाँ हुँदा पनि विकासका केही कार्यक्रमा आउनुपर्ने थियो, त्यो त भएन,’ भट्टराईको तर्क छ । निर्वाचित सांसद नभए पनि श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसम्म भए ।
तर, त्यो बेला उनले जिल्लामा केही नगरेको आरोप स्थानीयको छ । श्रेष्ठ भने त्यसलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘त्यो बेला मलाई मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध हेर्ने जिम्मा थियो, त्यो काम मैले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरें, जे जिम्मेवारी दिइएको हो, त्यो पूरा गरें ।’
‘पहिले बाबुरामजीका पछाडि ठूलो पार्टी थियो र उहाँ प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुभयो, अहिले उहाँको पार्टी सरकार बनाउन सक्ने हैसियतको ठूलो छैन,’ स्थानीय मतदाता विष्णु रेग्मीले भने, ‘चुनाव जितेर गए पनि अब भट्टराईजीको हालत चित्रबहादुर केसी वा नारायणमान बिजुक्छे जस्तो हुन सक्छ ।’ उता श्रेष्ठका पछाडि ठूलो संगठन रहे पनि एमालेसँग पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा जाँदा श्रेष्ठको अहिलेकै जस्तो राजनीतिक प्रभाव बाँकी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने शंका गर्ने पनि छन् ।
यही स्थितिको रोचक प्रतिस्पर्धाले गोरखाका अन्य क्षेत्रको र प्रदेशसभाका चुनावका उम्मेदवारको प्रचार नै छायामा परेको छ । भट्टराई र श्रेष्ठकै सम्भावित परिणाम आकलनमा गोरखा व्यस्त छ । (कान्तिपुर दैनिक)